Amaxwebhu angamaNkohliso - Thenga amaPhepha amaNkohliso kwi-Intanethi | Amaxwebhu eGlobal
Thenga ilayisensi yomqhubi kunye nabanye kwi-Intanethi
Thenga iphepha-mvume lokuqhuba
Thenga ikhadi lesazisi
Thenga imvume yokuhlala
Thenga izatifikethi ze-IELTS
Faka isicelo seMisebenzi
Thenga ezinye izatifikethi
- Khetha - Thenga ikhadi lokuhlala lase-UK Umsebenzi eCanada Iimvume zokuhlala eCanada Thenga izatifikethi ze-IELTS Thenga izatifikethi zokuzalwa zoqobo Thenga iiKhadi zeSazisi zase-UK Thenga amakhadi ezazisi zaseJamani Thenga ilizwe le-EU selayisensi yokuqhuba Thenga iphepha-mvume lokuqhuba laseMelika (onke amazwe akhoyo) EZINYE IZATIFIKETHI IZIXHOBO ZOKUHLAZIYA IZIQINISEKISO ZE-IELTS IIPASSPORTS IZIXHOBO ZE-JOB E-Canada Thenga iTransport Passports yaseNetherlands Thenga ilayisensi yokuqhuba yase-Asia Thenga iTransports yaseTshayina ebhalisiweyo Thenga ilayisensi yomqhubi waseKhanada Thenga amakhadi ezazisi zasePoland Thenga ilayisensi yomqhubi waseJamani Thenga amakhadi e-ID e-Italiyane Thenga iphepha-mvume lokuqhuba laseSweden Thenga iidiploma ezibhalisiweyo Thenga iphepha-mvume lokuBhalisa laseTaliyane elibhalisiweyo Fumana iiVisa zeLizwe le-EU ngokulula Ukuthenga kwelayisensi yokuThengisa yaseHungary Thenga iKhadi eliluhlaza lokwenyani laseMelika Thenga i-Lisence yomqhubi we-UK yokwenene Thenga iimvume zokuhlala zaseSweden Thenga iphepha-mvume lokuqhuba laseRomania CARDS ID Thenga ilayisensi yomqhubi waseBelgian Thenga iipasipothi zaseKorea zoqobo Thenga iphepha-mvume lokuqhuba laseSpain Thenga iipasipoti zaseAsia Thenga iPhepha-mvume lokuqhuba lasePoland Thenga iphakheji yokuchonga epheleleyo yamazwe e-EU Thenga ilayisensi yomqhubi waseFransi Thenga iiKhadi zeSazisi zaseBelgake Thenga iphepha-mvume lokuqhuba lase-Austrian Thenga amakhadi ezazisi zaseJamani Thenga iphepha-mvume lokuqhuba lasePortugal Thenga amakhadi ezazisi zaseAsia Thenga iphepha-mvume lokuqhuba laseNorway Thenga i-TOFL yangempela Faka isicelo seLayisensi yokuqhuba yoMqhubi waseBulgaria Thenga izatifikethi zoMtshato woqobo Fumana ilayisensi yomqhubi waseNetherlands Faka isicelo seMelika neeVisa zaseKhanada Thenga iphepha-mvume lokuqhuba Danish Faka isicelo se-Visa yase-UK Thenga iilayisensi zabaqhubi baseSwitzerland / iphepha-mvume lokuqhuba laseSwitzerland Isikolo eKhanada Thenga iPasipoti yaseburhulumenteni yaseburhulumenteni yaseMelika Amaphepha e-EU ahlala abahlali Thenga iiPasipoti zangempela zaseCanada Iimvume zabahlali base-Itali Thenga iipasipoti ze-EU Amazwe aseAsia Iimvume zabahlali ziyafumaneka Thenga iencwadana zokundwendwela zase-UK zakuqala Thenga ikhadi lokuhlala lase-UK IIMPEPHA ZOKUQHUBA
IZIXHOBO ZE-JOB E-Canada
Thenga ilizwe le-EU selayisensi yokuqhuba
Thenga iphepha-mvume lokuqhuba laseMelika (onke amazwe akhoyo)
Thenga ilayisensi yokuqhuba yase-Asia
Thenga ilayisensi yomqhubi waseKhanada
Thenga ilayisensi yomqhubi waseJamani
Thenga iphepha-mvume lokuqhuba laseSweden
Thenga iphepha-mvume lokuBhalisa laseTaliyane elibhalisiweyo
Ukuthenga kwelayisensi yokuThengisa yaseHungary
Thenga i-Lisence yomqhubi we-UK yokwenene
Thenga iphepha-mvume lokuqhuba laseRomania
Thenga ilayisensi yomqhubi waseBelgian
Thenga iphepha-mvume lokuqhuba laseSpain
Thenga iPhepha-mvume lokuqhuba lasePoland
Thenga ilayisensi yomqhubi waseFransi
Thenga iphepha-mvume lokuqhuba lase-Austrian
Thenga iphepha-mvume lokuqhuba lasePortugal
Thenga iphepha-mvume lokuqhuba laseNorway
Faka isicelo seLayisensi yokuqhuba yoMqhubi waseBulgaria
Fumana ilayisensi yomqhubi waseNetherlands
Thenga iphepha-mvume lokuqhuba Danish
Thenga iilayisensi zabaqhubi baseSwitzerland / iphepha-mvume lokuqhuba laseSwitzerland
Thenga iPasipoti yaseburhulumenteni yaseburhulumenteni yaseMelika
Thenga iiPasipoti zangempela zaseCanada
Thenga iipasipoti ze-EU
Thenga iencwadana zokundwendwela zase-UK zakuqala
Thenga iTransport Passports yaseNetherlands
Thenga iipasipothi zaseKorea zoqobo
Thenga iTransports yaseTshayina ebhalisiweyo
Thenga iipasipoti zaseAsia
Thenga iiKhadi zeSazisi zase-UK
Thenga iphakheji yokuchonga epheleleyo yamazwe e-EU
Thenga amakhadi ezazisi zasePoland
Thenga iiKhadi zeSazisi zaseBelgake
Thenga amakhadi ezazisi zaseJamani
Thenga amakhadi e-ID e-Italiyane
Thenga amakhadi ezazisi zaseAsia
Thenga i-TOFL yangempela
Thenga iidiploma ezibhalisiweyo
Thenga izatifikethi zoMtshato woqobo
Thenga izatifikethi zokuzalwa zoqobo
Faka isicelo seMelika neeVisa zaseKhanada
Fumana iiVisa zeLizwe le-EU ngokulula
Faka isicelo se-Visa yase-UK
Thenga iKhadi eliluhlaza lokwenyani laseMelika
Amaphepha e-EU ahlala abahlali
Iimvume zokuhlala eCanada
Iimvume zabahlali base-Itali
Thenga iimvume zokuhlala zaseSweden
Amazwe aseAsia Iimvume zabahlali ziyafumaneka
Thenga ikhadi lokuhlala lase-UK
UKUTHENGA IZILWANYANA ZOKUGQIBELA | UKUTHENGA UKUFUYELA IXESHA LOKUKHUSELA | IBHODI YENKCAZO YESIKOLO | FUND IKHADI LOKHUSELEKO | IPASISI EBHALISIWEYO | FUMA PASSPORT | FUNDA IZIQINISEKISO ZOBUGCISA | IZIPHUMO ZOKUHLAZIYA | FUNDA ISATIFIKETHI SEMATRIKI | IZIQINISEKISO ZE-IELTS ezibhalisiweyo kunye nokunye.
Kumaxwebhu ehlabathi, singumanyano oluvulekileyo lokubhaliswa kwamaxwebhu okuqinisekisa abhalisiweyo kunye nabubuxoki kwihlabathi liphela. Ubalo lwehlabathi lwezinto ezikhutshwayo lwenziwe nje ngezantsi. Ukubala kuhlaziywa rhoqo ngeenkcukacha-manani ezintsha zenyanga. Abathengi bayasebenza kule webhusayithi kwaye kuxhomekeke kwiimfuno zabo, sithatha isigqibo sokuba yeyiphi iarhente eyisingatha isicelo sabo. Iiarhente ezingakumbi zinokufaka isicelo sokujoyina lo mbutho. Nangona kunjalo, sivumela kuphela izicelo xa umenzi-sicelo ehambisa amaxwebhu amathathu okuqala kwaye ahlawule umrhumo wabo wobulungu. Amaxwebhu esibonelela ngawo abandakanya ilayisensi yokuqhuba inkohliso ebhalisiweyo, incwadi yokundwendwela ebhalisiweyo, incwadi yesazisi ebhalisiweyo, imvume ebhalisiweyo yomhlali, isitifiketi somtshato esibhalisiweyo, thenga isitifiketi se-IELTS esibhalisiweyo, idiploma ebhalisiweyo, njl.
Izibalo zeNyanga ngoSeptemba 2019:
Iipasipoti emhlabeni jikelele
Imisebenzi Kwelinye ilizwe
Izatifikethi kunye nabanye
Amakhadi ezazisi ayinyani
Qaphela: Amaxwebhu e-Global akanakuthumela imifanekiso yesampula kwiwebhusayithi yethu kuba ulwazi lwabathengi luhlala luyimfihlo. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukubona ukuba yeyiphi incwadana yokundwendwela, ilayisensi yokuqhuba, njl.nokujongeka njani, uqhagamshelane nathi kwaye siya kuthi sinxibelelane nomnye wabathengi bethu ukufumana imvume yokukuthumelela amaxwebhu abo ukuze babone.
UKUYENGA NGOKWENYANI | FUNDA IZILWANYANA ZE-LICENSE KWI-intanethi
Abasebenzisi bendlela kwihlabathi jikelele basebenzisa ilayisensi yokuqhuba ukuzazisa. Ilayisensi yokuqhuba ichaza ngokulinganayo uhlobo lwesithuthi umnikazi avunyelwe ukuba asebenze. Nangona kunjalo, ubunzima obuninzi buhlangana kwilizwe jikelele ekufumaneni ilayisensi yokuqhuba. Amaxwebhu ehlabathi jikelele abonelela ngesisombululo esinexabiso eliphantsi kubantu abazimiseleyo ukuthenga ilayisensi yokuqhuba. Ukuze sikwazi ukujongana nale ngxaki kwihlabathi liphela, sisebenzisana ngononophelo nabadibene nabo abazibonakalise ngokunikezela ngamaphepha-mvume okuqhuba kwingingqi yabo ngokungaguqukiyo nangexesha.
Ngaphaya koko, abo sidibana nabo babandakanya abanini bezikolo eziqhuba ngaphezulu kwe132, amagqwetha onyanzeliso lomthetho kunye namagosa ezothutho. Ukongeza koku, kunye neqela lethu elibekekileyo sibhalisa ngokusemthethweni iilayisensi zokuqhuba ezithengiwe kwiiarhente zethu ngokuzibhalisa ngokusemthethweni kurhulumente wolwazi. Umzekelo, e-UK, sibhalisela i-DLA ne-DVLA. Thenga ilayisensi yokuqhuba yokwenyani kwi-Intanethi ngamaxwebhu ehlabathi ngokufaka isicelo apha. Akukho xinzelelo lokuqhuba kwiimviwo, akukho ukulinda iinyanga, akukho kunqunyanyiswa. Qhuba ngokusemthethweni.
UKUFAKA ISICELO SESIQINISEKISO NGEXESHA LOKUFUNDA
Ukufumana ilayisensi yokuqhuba kuthi, kuya kufuneka Qhagamshelana nathi Ngale webhsayithi ukuze omnye wabathengi bethu anikhokele ukuze nisebenzise isicelo sethu ifomu lesicelo sokuqhuba. Khumbula ukukhetha kwifom yesicelo ukuba ufuna ilayisensi yokuqhuba yokwenyani okanye ilayisensi yokuqhuba eyinyani.
I-DIFFERENCE BETWEENALEN YENKQUBO KUNYE NOKUFUNDA AMANZI AMAHLATHI
Ilayisensi yokuqhuba yokwenyani evela kumaxwebhu eGlobal ibhalisiwe kwiinkcukacha zikarhulumente kwaye iya kusebenza nakweziphi iinkqubo zokuskena. Ngephepha-mvume lokuqhuba lokwenyani, uqinisekile kuzo zonke iitsheki kunye nokuqinisekisa nkqu kwiimeko zengozi.
Kwelinye icala, ilayisenisi yokuqhuba inkohliso ifana kakhulu nelayisensi yokuqhuba yokwenyani. Nangona kunjalo, ulwazi lwelayisensi yokuqhuba inkohliso alubhaliswanga kuyo nayiphi na i-database kaRhulumente. Oku kuthetha ukuba umsebenzisi welayisensi yokuqhuba inkohliso ayizukudlula nakuphi na ukuskena iinkqubo. Abantu bathenga iphepha-mvume lokuqhuba ngobuxoki kuba lixabiso eliphantsi kwaye lisetyenziswa kakhulu ezilalini.
IZAKHONO ZENKQUBO YOKWENZA | FUMA I-PASSPORTS KWI-intanethi
Unokufumana ipasipoti yangempela kwi-intanethi ngokukhuselekileyo nangamaxabiso afikelelekayo. Oku kunokwenza lula ukuhamba kwabantu ukuya kumazwe abo eephupha kunye nokuhambela amanye amashishini kulula kakhulu. Ukufumana incwadana yokundwendwela yokwenyani kwi-intanethi, faka nje kule ndawo kwaye ucacisa kwicandelo elifutshane lamaxwebhu kwifom yesicelo oyifunayo ukuba ufumane ipasipoti yangempela. Ukongeza kule nkcukacha, yeka ngokuchanekileyo kwifom ukuba ufuna ipasipoti yakho yiphi na.
Sithatha inkathalo kuwo wonke umsebenzi wephepha kwaye konke okufuneka ukwenze ukusinika ulwazi oluyimfuneko lwe-bio-metric ukongeza kwimini oyifunayo yokukhutshwa komhla wokuphela kwepaspoti yakho yokwenyani.
Ukongeza, sinikezela ngeencwadana zokundwendwela ezibhalisiweyo zikarhulumente ezihlangabezana nemigangatho yokhuseleko kwaye zidlule kuyo nayiphi na inkqubo yokuskena ngelixa zihambelana noomatshini bokufunda idatha.
Okokugqibela, iincwadana zethu zokundwendwela zokwenyani zivelisiwe, zenziwa, zibhalisiwe kwaye zivavanywa ngokucokisekileyo ukuze abaxumi bethu kwaye bazisebenzise ngokuzithemba ukuhambahamba emhlabeni nangomsebenzi naphi na apho baya khona. Nxibelelana neearhente zethu nje ukuze zikukhokele faka isicelo sepasipoti yakho yenyani.
Thenga iPASSPORTS KWI-intanethi
Amaxwebhu eGlobal avelisa iipasipoti ezingezizo zabathengi abathile abafuna ukuthenga ipasipoti kunye nokusebenzisa nje ngenjongo yokufihlakala. Ipasipoti eyinyani ikhangeleka njengepasipoti yangempela, umgangatho ofanayo kunye neempawu eziyimfihlo.
Nangona kunjalo, umahluko phakathi kwencwadana yokundwendwela eyinyani kunye nepasipoti yokwenyani kukuba xa uthenga ipasipoti ezingezizo kwi-Intanethi, ulwazi lwencwadana yokundwendwela ayibhaliswanga kuyo nayiphi na indawo yolwazi lukarhulumente. Ngapha koko, ukungabikho kolwazi olungelulo lwencwadana yokundwendwela kugcino lukaRhulumente lwenza ukuba umhambisi wephasipoti oyinyani abe semngciphekweni wemicimbi yezokhuseleko kwisikhumulo sezindiza.
Okokugqibela, njengoko uninzi lwabathengi luya kuthanda ukuba neencwadana zethu zokundwendwela ngamaxabiso aphantsi, sihlala sibacebisa ukuba bahambe nepasipoti yangempela, nangona ibiza kakhulu kuba ikhuselekile ukuyisebenzisa naphina. Iya kuba senza kakuhle ukuhlaziya uluhlu lwethu lwamaxabiso kwi-intanethi. Nxibelelana neearhente zethu ngale webhusayithi kwaye ziya kukukhokela ugcwalise ifom yesicelo ekundwendweleni kwepasile.
IZAKHONO ZOKWENZA IZIBHENGEZO KWI-intanethi
Amaxwebhu ehlabathi avelisa amakhadi e-id okwenyani. Umgangatho wamakhadi ezazisi okwenyani asuka kumaxwebhu ehlabathi awathandabuzeki. Ukongeza kumgangatho wezinto ezikhoyo zeKhadi leZazisi ezithengiswayo kwiwebhusayithi yethu, siqinisekisa ukuba ulwazi lubhalisiwe kwiinkqubo zolwazi zikarhulumente ezifanelekileyo. Awunayo into yokoyika ukuthatha ii-Cards zethu zeNgcaciso kwimatshini yokuvavanya idatha yokuvavanywa kukarhulumente. Nxibelelana neearhente zethu ngale webhusayithi ukuze isikhokelo sakho ukuba usisebenzise. Ifom yesicelo seZazisi zamakhadi.
ZUZA UKWENZA IIKHODI ZENKCAZO KWI-ONA
IiKhadi zeZazisi zomgunyathi welizwe jikelele zikumgangatho olungileyo womzimba. Ngokwahlukileyo kumakhadi ezazisi awawafumanayo kuthi, amakhadi e-ID awabhaliswanga kwiinkcukacha zikarhulumente. Ke ngoko, amakhadi ethu e-ID e-fake akaqinisekiswanga isazisi sam se-ID yeeKhadi zokuqinisekisa idatha. Ukuthenga ikhadi lesazisi elingelilo kwinkqubo yethu, nxibelelana neearhente zethu ukuze ufumane isikhokelo kwaye wenze isicelo ngokusebenzisa Ifom yesazisi ye-ID ye-fake.
IZAKHONO ZOKWENZA IZENZO
Thenga imvume yokwenene yokuhlala kumaxwebhu ehlabathi ngokusebenzisa “imvume yokuthenga” iifomu zesicelo. Iimvume zethu zokuhlala ziqinisekisa ukuhlala kwakho ngokusemthethweni kulo naliphi na ilizwe olithandayo. Amakhadi aluhlaza ase-US umzekelo yenye yezona mvume zixabisekileyo emhlabeni. Siphatha ngokungahambiyo ulwazi lwakho malunga nesimo sokufuduka kwaye sikwenze kube semthethweni ukuhlala kwilizwe lakho. Ngamaxwebhu ehlabathi, ungathenga imvume yokuhlala yasekuqaleni, uthenge amakhadi e-US GREEN Cards, uthenge iimvume zokuhlala zaseCanada, uthenge iimvume zokuhlala zaseJamani, kunye nokunye okuninzi. Sihambisa amakhadi akho abahlali ngokukhuselekileyo kwindawo oyithandayo. Nxibelelana nathi kwaye yenza isicelo semvume yokuhlala apha.
Amaxwebhu ehlabathi jikelele anikezele ngempumelelo kwizatifikethi zemfundo kunye nezentlalo kubaxumi abasweleyo. Isicelo sesatifikethi semfundo kwi-2019 sigqithiselwe kwangaphambili ngabantu abafaka izicelo zezatifikethi ze-IELTS kwi-Intanethi. Abathengi ikakhulu bafaka izicelo zokuthenga izatifikethi zeBritish Council i-intanethi kwi-Intanethi, bathenge izatifikethi zeCambridge kwi-Intanethi, bathenge isitifiketi se-idp kwi-Intanethi. Sibonelela ngokulinganayo ngeediploma zekholeji kunye nezatifikethi zaseyunivesithi, G. math, TOFL, kunye nabanye abaninzi. Nxibelelana nathi ukuze ufumanise ukuba sikunika isatifikethi sakho. Sisenokukunceda nje ufumane umsebenzi wakho wamaphupha.
Izatifikethi zentlalo ezinikezelwa ngamaxwebhu ehlabathi jikelele zibandakanya: izatifikethi zomtshato, izatifikethi zokusweleka, izatifikethi zokuzalwa kunye nokunye okuninzi. Nxibelelana nathi ku yenza isicelo setifiketi zakho.
IMISEBENZI YAMAZWE NGAMAZWE
Ubumbano lwamaxwebhu ehlabathi basebenzise inethiwekhi yabo eyomeleleyo ukufumana imisebenzi kwihlabathi liphela ehambelana neeprofayile zomenzi wesicelo. Abafakizicelo abasebenzayo bamanye amazwe bafaka izicelo zethu ifomu yesicelo somsebenzi . Amaxwebhu ehlabathi jikelele akwazi ukufumana imisebenzi kubaxumi kwaye aqhubekeka namaxwebhu abo ukuze bawafudukele eCanada, e-UAB, eUSA, eYurophu naseSouth Korea. Ngenisa iprofayile yakho kunye neearhente zethu ziya kuqhakamshelana nawe kwaye ngethemba lokufumana umdlalo womdlalo kwindawo yakho yephupha. Sinabaxumi abafuna imisebenzi kumazwe athile ukuze baqhubele phambili iinkqubo zabo ze-visa. Kwimeko yaseCanada, abathengi abanjalo baphume banikwe imisebenzi ye-LMIA evunyiweyo.
Umhlaba wonke awunakugxininisa ngakumbi kwiinzuzo zokunxibelelana nezinye iarhente ezivelisa iiarhente kwihlabathi liphela. Amaxwebhu ehlabathi jikelele acebisa ukuba nayiphi na iarhente esemthethweni efuna ukwandisa indawo yayo yempembelelo kufuneka isebenze ukuze ibe yinxalenye yethu. Siza kukugcina iinkcukacha ziyimfihlo kwaye ngembuyekezo, unokuhlala ufumana uncedo nakweyiphi na enye arhente yelungu ukuqinisekisa ukuba iimveliso zakho zihlala zikwimigangatho yangoku. Ukongeza kuloo nto, iiarhente zabathengi zifumana uncedo ekuhanjisweni kweempahla ukunciphisa isitampu senani lokusilela ukunikezela kunye nokugcina igama lombutho wethu. Ukujoyina le ntlangano, usebenzisa le linki yewebhusayithi (Faka isicelo sokujoyina) kwaye uqinisekise ubuchule bakho ngokuhambisa amaxwebhu amathathu ngempumelelo kwingingqi yakho, kufuneka ube nayo iwebhusayithi yakho kwaye ekugqibeleni xa yamkelwe, uhlawula umrhumo wobhaliso lwe5000 USD. Wamkelekile kubuhlobo bethu.
Nxibelelana nathi apha.
Umyalezo wakho? *
Rhoqo kwinkonzo yakho
Faka isicelo sokujoyina
× Ndingakunceda njani?